သူမ၏မျက်လုံးအဆုံးသတ်နောက်ကွယ်မှရှင်းပြသည်မှာ - ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ - သတင်း
သူမ၏မျက်လုံးများအဆုံးသတ်နောက်ကွယ်တွင်ဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည် - ဒါဆိုငရဲတကယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။
Okflix မှာ Behind Her Eyes ရဲ့အဆုံးသတ်ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်။ သည်းထိတ်ရင်ဖို၏နိဂုံးအကြောင်းကိုဖြည်ဖို့ဤမျှလောက်ရိုးရှင်းစွာရှိပါသည်။ သငျသညျစာသားတစ်ခုလုံးကိုစီးရီးတစ်လျှောက်လုံးကြောင်းအဆုံးသတ်မှာအရိပ်အမြွက်ပြောကြားနိုင်ပါပြီနှင့်ငါနေဆဲငါကညာဘက်ရှေ့မှောက်၌ထွက်ကစားခဲ့သည်အထိဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ပါသည်မှန်းဆချင်ပါတယ်ထင်ကြဘူး။ Shocked တစ်ခုလြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲသည်ဇာတ်လမ်းတွဲငါးခုအထိဇာတ်ကွက်တော်တော်လေးနှေးကွေးသည်။ ညဥ့်နက်သောဘေးများမှခံစားနေရသောကြင်ဖော်မဲ့မိခင် Louise နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံသည်။ သူမသည်ဘားတွင်ဒါဝိဒ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့သည်နမ်းကြသည်။ နောက်ထပ်အရာတစ်ခုမှာ Louise အလုပ်သို့ ဦး တည်နေသည်။ David သည်သူမလက်ထပ်သူဌေးအသစ်ဖြစ်သည်။ Yikes ။ စီးရီးတစ်ခုကိစ္စ၏ပုံမှန်ပုံပြင်ဖြစ်သွားသည်ပုံရသည်, ဒါပေမယ့် Louise ထို့နောက်ဒါဝိဒ်၏ဇနီး Adele နဲ့မိတ်ဖွဲ့။ , ကျနော်တို့မကြာမီနောက်ကွယ်မှပေါ်မှောင်မိုက်တစ်ခုခုရှိကွောငျးကိုတွေ့မြင်စတင်။
ဒါကြောင့်သူကနှေးကွေးခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ပြန်လည်စုစည်းကြပါစို့ - ဒီမှာသူမ၏မျက်လုံးများ၏နောက်ကွယ်ကရှင်းပြသည်ရဲ့။ ကြိုးသိုင်းကြိုး။
အိုကေဒါကြောင့်ဒီမှာ Behind သူမ၏မျက်လုံးအဆုံးသတ်တစ် ဦး အပြည့်အဝပျက်ပြားရှင်းပြထားပါတယ်
Behind Her Eyes ၏နိဂုံးချုပ်မှာဖြစ်နိုင်သမျှတိုတောင်းပြီးချိုမြိန်စွာရှင်းပြခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်ရော့ခ်တလျှောက်လုံးဖြစ်သည်။ ရော့သည်ထူးဆန်းသောကိုယ်ခန္ဓာကိုအိပ်မက်များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သူ၏စုံလင်သောအသက်တာကိုရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ နှင့်စကော့တလန်အမွေဆက်ခံသူ Adele သည်ဤအရာအားလုံးကိုပထမဆုံးသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Louise အနေဖြင့်အပေါင်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုအဖြစ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ပြန်ဖွင့်ကြကုန်အံ့။ သူမ၏မိဘများကိုသတ်ဖြတ်သည့်မီးလောင်မှုမှဒါးလ်အားကယ်တင်ပြီးနောက် Adele နှင့် David တို့သည်စုရုံးခဲ့ကြသည်။ ဒေးဗစ်သည်ပြင်းထန်သောမီးလောင်ဒဏ်ရာများခံစားခဲ့ရပြီးသူ၏ဝမ်းနည်းမှုကိုဖြေရှင်းရန်အဒဲလ်ကို Westlands Rehab သို့ပို့လိုက်သည်။ ဒီမှာသူမဟာရော့နဲ့တွေ့ပြီးသူတို့ဟာအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးဌာနမှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ရော့နှင့်အဒဲလ်တို့သည်သူငယ်ချင်းများဖြစ်နေကြပြီးအက်ဒဲလ်နှင့်ဒေးဗစ်တို့လက်ထပ်ကြသည်။ ရော့နဲ့ဒေးဗစ်တို့ဟာအဆင်ပြေနေပုံရတယ်။ ထိုအခါစီးရီးဒါဝိဒ်နှင့် Louise ရှိသည်သောကိစ္စမှ skips နှင့် Adele သရုပ်ဆောင်ရဲ့ပဲလိုက်တယ်, ပြောပါစေ။
စီးရီးအဆုံးမှာတော့ Adele ကသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်ခွာသွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ် နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာစီမံကိန်း ထို့ကြောင့် Louise နှင့် David တို့သည်သူတို့၏ကိစ္စများတွင်တက်ကြွနေသည့်အရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ David Marianne နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်နောက်ဆုံးအမျိုးသမီးနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းအားဖြင့် Adele သည်ထိုအချိန်တွင်အနိုင်ရရှိခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဤအချိန်တွင်သူမသည်သူမ၏ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုမိုနီးကပ်စေရန်နှင့် Louise နှင့်မိတ်ဖွဲ့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Adele ကသူမသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်ခွာခြင်းနှင့်သူမ၏ညဥ့်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုထိန်းချုပ်ရန်သူမ၏နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်သူ Adele အပေါ်သူ၏ခံစားချက်များကိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်နှင့် Lucid အိပ်မက်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ရှိရာ Louise ရော့၏ဟောင်းနွမ်းမှတ်စုစာအုပ်ကိုပေး၏။ ဤသူအပေါင်းတို့သည် Adele ရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်သို့ကျွေးမွေး၏။ သူမဟာ Louise ကို David ကိုလှည့်ပြီးသူမကိုကူညီဖို့စီမံခဲ့တယ်။
ထိုအချိန်မှစ၍ Rob သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်သေဆုံးခဲ့ပြီး Adele သည်သေခြင်းတရားကိုဖုံးကွယ်ထားကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ရသည်။ သူမ၏မိဘများအိမ်ယာရှိခန္ဓာကိုယ်ကိုရေတွင်းထဲတွင်ပုန်းအောင်းနေစဉ် Adele သည်ဒါဝိဒ်၏နာရီကိုရေတွင်းထဲသို့ချပစ်လိုက်ရာ Adele နှင့် David တို့ဘယ်တော့မှကွဲပြဲမသွားနိုင်ကြပါ။ အစဉ်အဆက်အချဉ်သွား၏။ သူမအမြဲလိုချင်သောဒေးဗစ်ကိုအဒယ်လ်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။
သို့သော်သူသည်လုံလောက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီးရဲသို့သွားပြီးအားလုံးကိုအဆုံးသတ်တော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်သောအခါ Adele ကသူမသည်ထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်သည်ကိုသိသည်။ ဒါကြောင့်သူမဟာ Louise ကိုကယ်ဖို့လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိပြီးသူမအိမ်ကိုမီးနှင့်သတ်သေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ Louise အထဲမှာမရရှိနိုင်, ဒါကြောင့်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်မှစွန့်ခွာခြင်းနှင့် Adele ဆီသို့သွားရန်သူမ၏အိပ်မက်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် astral စီမံကိန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
သို့သော် Adele လည်းသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်ခွာနှင့် Louise ရဲ့အချည်းနှီးသောခန္ဓာကိုယ်ကိုကျော်ယူအိမျထဲသို့ဝင်နှင့် Adele ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယခုသူသည်အမှန်တကယ် Louise, သတ်ပစ်ရန်ဤအခွင့်အလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့် Adele က Louise နဲ့လဲလှယ်ပြီး Louise ကိုခန္ဓာကိုယ်အဟောင်းမှာရှိနေချိန်မှာသတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်အဒယ်လ်သည်ဒါဝိဒ်နှင့်အတူပျော်ရွှင်စွာ Louise အနေဖြင့်နေထိုင်နိုင်ပြီးသူသည်ပညာရှိသူလည်းမဟုတ်ပါ။
Rob က Adele ကိုသူနဲ့အတူ astral projection လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါနောက်ထပ် flashback တစ်ခုတွေ့ရတယ်။ ဘေးထွက်မှတ်စု: ရော့က Adele ကိုစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာအရင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်။ အဆိုပါ pair တစုံဟာသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေထားခဲ့ပါနှင့် (ယခု Adele ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ) ရော့သည်သူ၏အမြန်အသွင်ပြောင်းနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်သည်, ဒါပေမယ့် Adele (ယခုရော့) ကမုန်းသည်နှင့်စနစ်တကျမရွှေ့နိုင်။ Rob (Adele ကဲ့သို့) သည်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ဟောင်း (Adele အစစ်အမှန်) ကို ဖြတ်၍ အလွန်အကျွံသောက်ဆေးထိုးပေးခြင်းဖြင့် Adele နှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ဟောင်းကိုသေစေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်, ဒီတပြင်လုံးကိုအချိန် Adele သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရော့ခဲ့ !!!! အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဒါဝိဒ်သည်သူမ၏နောက်တဖန်မချစ်နှင့်သူမ၏လိုက်တယ်သရုပ်ဆောင်မြင်နေခဲ့သည် !!!
သို့သော်ကိုင်ထား, ယခု Adele Louise နှင့်အတူအလောင်းများကိုဖလှယ်ဘူးဆိုလိုတယ် - ရော့ပြုခဲ့ !!! ရော့ယခု Louise ဖြစ်ပါတယ် !! Louise (Rob) နှင့် David (David) တို့သည်အိမ်ထောင်ကျပြီးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သင့်သည်။ သို့သော်အနည်းငယ်သာဒါဝိဒ်သည်သူသည်အမှန်တကယ်ပဲ Louise ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရော့လက်ထပ်ခဲ့သည်ကိုငါသိ၏။
စီးရီးအစောပိုင်းကာလများတွင်ရော့ကသူသည်ယောက်ျားများကိုစိတ်ဝင်စားသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်သောအခါမျှအမှတ်အသားပြုခြင်းမရှိသော်လည်းသူသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဒါဝိဒ်ကိုစိတ်ဝင်စားလာပုံရသည်။ ဒါကြောင့်ဒီသူက Louise ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလွှဲပြောင်းယူပြီးဒါဝိဒ်နဲ့အတူနေချင်ခဲ့တာကိုရှင်းပြတယ်။ ရောဘတ်သည်ဒေးဗစ်သည်အဒဲလ်နှင့်ဆက်ဆံမှုကိုမနာလိုဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးသူမနှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်လာပြီးသူနှင့်အက်ဒဲလားတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစုံစမ်းခဲ့သည်။ Adele နှင့်စကားပြောသောအခါရော့သည်ဒါဝိဒ်အားစုံလင်သူအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနေလျှင် (ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်မဟုတ်)၊ ရီးရဲလ်အဒဲလ်သည်အစကတည်းကသေဆုံးခဲ့သည်။ ရော့ကသူတို့အလောင်းများကိုလဲလှယ်သောအခါသူမကိုသတ်ပစ်လိုက်သည်။ သူသည်သူမကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီ၊ ယခု Louise အစစ်အမှန်လည်းသေပြီ။ သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှင့်ဒါဝိဒ်မှလက်ထပ်ခဲ့သည်။
Behind Her Eyes ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ Netflix မှာရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix သတင်းများ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေ,ိများ၊ အစက်အပြောက်နှင့်မှတ်စုများအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• ဤအရာအားလုံးသည် Netflix ရှိ Behind Her Eyes တွင်အသုံးပြုသောစစ်မှန်သောဘဝရိုက်ကူးသည့်နေရာများဖြစ်သည်
• Netflix ရှိ Behind Her Eyes နှင့်ပတ်သက်သောဤမှတ်ဥာဏ် ၃၃ ခုသည်ပြပွဲထက် ပို၍ ပင်ရိုင်းစိုင်းသည်